Wararka ku saabsan OnePlus: bilaabista, mobilada, xididka iyo waxyaabo kale oo badan - Androidsis | Androidsis
OnePlus waa soo saare taleefan oo lagu aasaasay Shiinaha. Waa mid ka mid ah shirkadaha ugu dambeeyay ee ku shaqeeya Android, oo la aasaasay 2013. Waxay inta badan u heellan yihiin soo saarista taleefannada casriga ah, in kasta oo ay sidoo kale ka shaqeeyaan alaabooyin kale sida telefishan u gaar ah. Waa sumad diiradda saareysa soo saarista taleefannada ku dhex jira heerka sare.
OnePlus waxay u taagan tahay istiraatiijiyadeeda ah inay soo saarto taleefano yar sanadkii (badanaa laba). Qaar ka mid ah moodooyinka u taagan u qeexitaanadooda wanaagsan iyo qiimaha la awoodi karo ee dhexdooda ah. Halkan waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho dhammaan wararka, wararka iyo dib u eegista taleefannada OnePlus oo wata Android sida nidaamka hawlgalka.
OnePlus 9 iyo 9 Pro, labada calan ee cusub ee ugu wanaagsan dhamaadka-dhamaadka 2021
OnePlus ayaa ugu dambeyntii soo bandhigtay labadeeda casriga ah ee cusub ee OnePlus 9 oo ah astaamo muhiim ah ...
Filashooyinka ku wareegsan OnePlus 9 ayaa sarreeya, mana ahan wax aan jirin. Waxaan ka hadleynaa markabka soo socda ...
Kaamirada OnePlus 8T waa mid wanaagsan, laakiin ma cabirto ilaa dhamaadka sare ee ugu sareysa
Jiil kasta oo cusub oo taleefanno heer sare ah, dalabaadka adeegsadayaasha ee heerka sawir qaadashada ayaa ka weyn, sabab ...
OnePlus Nord wuxuu helayaa xasilloonida OxygenOS 11 iyo taxanaha OnePlus 7 iyo 7T waxay helayaan Open Beta 3
OnePlus waxay hadda siineysaa cusbooneysiin cusub oo software dhowr ah taleefannadeeda casriga ah. The OnePlus Nord, Dhanka kale, ...
Waxay noqon kartaa Maarso 9 marka shirkadda Shiinaha ay xaqiijiso soo saarista taxanaha OnePlus 9 ee loogu talagalay ...
OnePlus waxay soo saartay cusbooneysiin cusub oo software ah oo loogu talagalay OnePlus Nord kaas oo imanaya sida OxygenOS 10.5.11. Tani waxay u timid sidii ...
by Nerea Pereira samee Bilaha 5 .
Runtu waxay tahay xogaha laxiriira OnePlus 9 iyo OnePlus 9 Pro ma joojinayaan imaanshahooda.Waan ognahay in ...
OnePlus 9 iyo OnePlus 9 Pro waxay ku dari doonaan xeedho sanduuqa
Markasta oo isbeddel ku yimaado isbeddelka adduunka ee taleefanka, bilaha ugu horreeya (in ...
Waxaa jiray warar xan ah oo badan oo ka hadlaya astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee kan xiga ee OnePlus 9. Qaar badan oo ka mid ah ...
OnePlus 8, 8 Pro iyo 8T waxay helayaan cusbooneysiin cusub oo leh hagaajinno badan iyo hagaajinno
The OnePlus 8, 8 Pro iyo 8T waxay hadda helayaan xirmo cusub oo qalab ah oo imanaya sida ugu badan ee ...
Shaandheeyay qeexitaanka buuxa ee OnePlus 6